Absinthe, dandelion, soursop, hemp: izvi zvinomera zvinouraya cancer - Afrikhepri Fondation
min kuverenga 13 min
L 'Absinthe (artemisia annua L) inozivikanwa kwezviuru zvemakore yakashandiswa kurapa marariya, uye vaongorori vachangowana kuti inogona kuparadza 98% yemasero emukenza mumapapu.
Chero chinomera chinotarisirwa sechakaipa kunze kwekunge chazowanikwa chakanakira hutano hwedu. Ngatitore semuenzanisoBvisa, chirimwa ichi, chinogadzirwa chinwiwa chakakomberedzwa, chakarambidzwa kwemakore, zvirikungofungidzirwa kurwisa nzvimbo dzinotyisa dzeavo vanoishandisa zvisizvo, vanotenderwa zvakare.
Yakanga iri 19ème zana remakore, iyo inonakidzwa inwiwa yevanyori, uye Van Gogh à Verlaine, achipfuura Emile Zola, uyo akarondedzera kuparadza muzita rake rakakurumbira " Assommoir Havana kuzvidza kuzvishandisa zvisina kunaka, uye zvaifungidzirwa kwenguva refu thujone, imwe yemamorekuru ayo, inogona kutungamira kupenga.
Zvino, zvidzidzo zvakaratidza kuti izvi hazvisizvo, uye iri kunakidzwa nekubudirira kumwe nhasi. link
Asi 'Bvisa inovanza zvimwe zvinhu, kusanganisira iya yekurapa cancer.
Zvose zvaizobva kumakuva akawanikwa pa Mawangdui, in Chine, kumabvazuva kwe Changsha dans Le Hunan, nzvimbo yakatsvaga mukati 1972, uye rine, pakati pezvimwe zvinhu, mabhuku ezvinyorwa zvine chokuita nemishonga yeChina uye kunyanya mishonga yemishonga. link
Aya magwaro anobuda kubva 168 nguva yedu isati yasimuka yaendesa zvivakwa zveartemisinin, kemikari yemakemikari inotorwa kubvaabsinthe. link
Pedyo nekumba, vatsvagiri veku University of Washington Narendra P.Singh et Henry C. Lai, yakabudisa chidzidzo chinoratidza izvozvo artemisinin inogona kunyatsobudirira kurapa kenza. link
Kunyange kana mubvunzo wacho uchikakavadzana, nzira yacho ichiri kufadza. link
Uyezve dzimwe miti yakawanda yemishonga inogonawo kuva nechipo chekurapa kenza: the voikukka somuenzaniso ...
Maererano nekuchangobva kuongorora kubva kuYunivhesiti ye Windsor au Kanadha, midzi ye voikukka ingadai ichinyanya kushanda kupfuura chemotherapy.
Cytotoxic mhedzisiro yemidzi midzi voikukka aigona kuuraya 96% masero e chronic myelomonocytic leukemia (chimiro chekenza yeropa) 48 heures chete mushure mekusimudzirwa.
Kuwanikwa kwezvinhu zvemutiro uyu inenge nyaya yenyengeri: Dhigirii Caroline Hamm, chiremba chegomarara, akawana kuti mumwe wevarwere vake aigara achinwa dandelion tei mumba yekumirira, uye hutano hwake hwave kuita…
Akavhura vhura biochemist, Siyaram Pandey, purofesa pa University of Windsor au Kanadhauyo akaedza kutsvakurudza, akabatsirwa nevadzidzi vake.
Akaedza kuongorora ropa revatano vakasiyana uye akazopedzisira awana: " iyo midzi inobvisa masero akauraya masero zvakanyanya kusarudza. Masero ane hutano haana kuurayiwa, nepo cancer maseru hongu ". link
Kunakidzwa kana iwe uchifunga nezve zvinoreva chirevo " inwa madandelions nemudzi »...link
Ngatisiye voikukka kune imwe mbeu yakagumbura kwemakore emakore ekukakavadzana kukuru: the hemp.
Kupikisa zvose zvisinei, the hempIye, zvakare, anogona kurwisa kenza mabudiriro.
Chokwadi, kana tichizotenda National Cancer Institute of US, the cannabinoids of Cannabis batsira kuparadza cancer nekuuraya maseru akakuvara mumuviri, uku uchichengetedza hutano maseru. link
Izvo zvakanga zvatozivikanwa kuti zviratidzo zvisingakwanisi "zvingabatsira" pakubatsira, pakati pezvimwe zvinhu, varwere kuti vatsungirire kurwadziwa, uye kukurudzira chido chavo, asi nekuwanikwa uku, kune zvakakwana kupa nharo itsva kune avo vanokukumbira. kwemazuva akawanda kusarudzwa kwekodhi.
Ngatisiye hemp zimutiAmazon, le Graviola.
Tsvakurudzo yebazi inoratidza kuti zvikamu zvechibereko zvemuti uyu, zvinonzi Guanabana(soursop) inogona kurwisana nekenza nehutano hwemhuka husingaiti hunoitaa, kuora muviri kana kurasikirwa nemvere, nekudzivirira masimba ezvirwere.
kubva 1976, le Guanabana kwaratidza kuve mumiriri anoshanda kwazvo mune akati wandei marabhoritari bvunzo.
Chidzidzo chakabudiswa mu nyanzvi yemasikirwo Products Akati chibereko ichi chinogona kusarudza kuuraya masero emukenza emakona ane simba guru kupfuura 10 000 mishonga chemotherapy. link
Mamwe mashoko pamusoro peizvi link.
Kunyangwe mashizha emuti Graviola inogona kushanda pakurwisana nekenza, uye inganyanya kunyatsopikisana nekoloni, mazamu, prostate, mapapu uye pancreatic kankere. link
Kuti uve wakakwana, tinofanirwa kutaura zvimwe zvinomera zvinozivikanwa nekudzivirira kwavo kenza zvinhu zvakadai Black nightshadela Wild chicory (Cichorium intybus), uye Sarsaparilla Glabra, zviwanikwa zvakaitwa nemasayendisiti kubvaUniversity of Florida, ivo Case Western Western University, Et Le King George Medical University, in India. link
Uye hazvisi izvo zvese: kutsvakwa na Ratna Ray, Associate Purofesa wePathology, pamwe chete neboka rake iyo University of Saint Louis, yakaratidza yakanakira chiito chekubvisa kwe Melon Amer, izvo zvinoderedza kukura kwekenza masero, uyewo kudzivisa kukura kweavo vemazamu uye kenza yeprotate. link
Nguva dzose tichionga juice ye Bitter melon, chidzidzo cheUniversity of Colorado, yakaratidzirwa kumisa kugona kwemasero emukenza wecancreatic kugaya glucose, nekudaro kudzikisira maseru 'sosi yesimba obva aparadza iwo.
Mumwe anogona kuwedzera kune urwu rurefu rwemishonga yemishonga inopesana nekenza, la Green chirettela chemombe, theanisela chinonhuwira nymphaeum, theArjuna, Ashwagandha, le Nyota yakaropafadzwa, dema cohosh, theaigremoinela celandine, ichi chimiro chakakurumbira chinoporesa marwadzo nekushandisa juisi yemajai pane izvi, le Nerprun purgative, le Clajeuxla Boswellia serrata, le Cordycepsla chimpila Umbellata, le Phytolacca americana, lebutterbur, le Lapachola Sum, variety of Ginseng Brazilianla zvinonhuwira zvinonaka, the clover ye pedyo, the Round-leaved sundew, (carnivorous plant) le Serenoa anopindura, lePolypodium decumanum, la valerian, chena, Pastel wevatengesi, theKinky sorrel, le zédoaire, (zvakasiyana-siyana zvehutu) la Dionée fly catcher,(imwe mhuka inotakura) the espinheira Santa, le Mullaca, le Mutamba...
Ngapedzei nemamwe mashoma emiti zvinogona kubatsira mukurwisana nekenza, zvakadai le turmeric, theGoldenseal, mukaka mutsva, theEchinacea, Ginger, the Gotu Kolala burdock, L 'Yarrow, le Rosemary. link
Asi isu hatifanire here kutanga tarwira kumusoro, kuti tidzivise kugara nhaka chirwere ichi chinotambudza gore rimwe nerimwe nekuda kwekufa 150 000 vanhu en Furanzi ? link
Isu tinoziva kuti kusvibiswa kwemhepo kunokonzerwa nekenza yakawanda yekenza, leukemia, (link) asi isu tinoziva zvishoma kuti mu detergents edu kune avo vane ngozi vanogona kukonzera kuora, kunyange kunyange kanzira.
Chokwadi, kana tichizotenda wongororo " 60 mamiriyoni vatengi », Zvimwe zvinogadziriswa zvine carcinogenic uye zvinodhaka zvechiropa.
12 machira emakwenzion 14 yakaedzwa, vakawanikwa vaine mhosva yekushandisa madhiraivha ane ngozi, uye kana vakaverengera-isina tsvina, "dhayi" Rhodamine B "Zvavainazvo zvinofungidzirwa kuti" zvichida carcinogenic irritant ".
chete 2 brand, Ecover et Rainett, vakawana nyasha nemeso evheti vemagazini. link
Nehurombo, hazvisi zvimwe zvekuvharidzira izvo zvine ngozi, maererano nemagazini imwe chete iyoyo, kune zvimwe 100 michina hwehupenyu hwezuva nezuva hune ngozi.
Zvikafu, zvigadzirwa, maseridhi, avo vakaongororwa nevanoongorora, hazvina kupa mugumisiro unokurudzira. link
Kudzokera kumashure kune nyukireya, sekukwanisika kwaunokwanisa kuita pasina masikisi uye zvimwe zvigadzirwa zvine ngozi zvevatengi, zvinowedzera kuoma kudzivirira kusvibiswa neredhiyo.
Tinoziva nhasi izvo Fukushima the cross thegungwa, uye inowanikwa pamhenderekedzo yeAmerican, asi inowanikwawo ikozvino mumapaipi emvura yevatengi ye Tokyo : kuwedzera kwekusvibiswa kwemhepo inonwisa mvura yakayerwa 24%. link
Sezvo shamwari yangu yekare yeAfrica inoti, " zviri nyore kudzivirira chirwere pane kuedza kuribata ".
Par olive olivean
Graviola mapiritsi 120 x 2000mg 4: 1 vegan michero inobvisa, mhando yechigadzirwa kubva kuMoriVeda (1x120 Tabs)
1 nyowani kubva pa15,40 €
Tenga 15,40 €
kubva munaGunyana 18, 2020 11:25 AM
Graviola muti unokosha kubva kuAmazon nharaunda yeSouth America uye chipo chakasiyana kubva kune zvakasikwa.
Pamusoro pemamita mashanu kusvika matanhatu pakukwirira, iine zvinhu zvakawanda zvinoshanda, izvo zvatakapiwa naAmai Nature.
Madzitete anotora michero sechinwiwa chinozorodza uye mashizha anoshandiswa kune mishonga yechinyakare
Yepamusoro bioavailability yekutenda kuburitswa kwema enzymes nekuvhenganisa mate uye kutungamira zvakananga kuburikidza ne mucous membranes
Graviola inogara iripo uye ndiyo yepakutanga kubva kuPeru. Dzidza zvakawanda nezvechigadzirwa mune tsananguro iri pasi apa.
Iko kushanya: kusangana kwekunze - Documentary (2015)
Chakavanzika chakachengetwa kwazvo munyika (Vhidhiyo)